Cudur kale oo ka dillaacay Shiinaha oo laga cabsi qabo inuu adduunka ku faafo - Idman news
Cudur kale oo ka dillaacay Shiinaha oo laga cabsi qabo inuu adduunka ku faafo
Beijing (Caasimada Online) – Digniin hor leh ayaa kasoo baxday seynisyahanada dalka Shiinaha, kadib markii ay ogaadeen in dalkaasi uu ka dilaacay xanuunka feyrus cusub oo ka dhasha xayawaanka Doofaarka.
Seynisyahanada ayaa waxay sheegeen in cudurkaan cusub uu la mid noqon karo feyruska safmarka ah ee hadda dunida dhibaatadiisa ka taagan ee COVID-19 oo dunida ku dilay dad gaaraya 500 kun oo qof.
Feyruskaan cusub oo laga helay doofaarada ayaa waxay dhaqaatiirtu sheegeen in hadda aysan jirin qatar weyn, balse ay taagan tahay cabsidiisa, loona baahan yahay in muhiimad gaar ah la geliyo sidii looga feejignaan lahaa halistiisa, waxayse ka welwelsan yihiin inuu si fudud ku faafi karo hadii la is dhigto.
Feyruskaan cusub ayaa baaris lagu sameeyay waxay seynisyahanadu sheegeen inuu la mid yahay xanuunkii safmarka ahaa ee Swine flu oo adduunka ka dilaacay sannadkii 2009-kii, kaasoo ka bilawday dalka Mexico.
Previous Somaliland oo ka laabatay tallaabo ay ku deg-degtay
Next DHAGEYSO: Prof, Cali Geedi Oo Senetor Faroole Weeraray Arin Weyna Kashifay
Barcelona oo guul ay u qalantay ka soo gaartay kooxda Villarreal… +SAWIRRO – Gool FM
Maxaa kacusub itoobiya wararkii ugudanbeeyay kacdoonka shacabka Oromada ay wadaa…
Maxaa kacusub itoobiya wararkii ugudanbeeyay kacdoonka shacabka Oromada ay wadaa… July 5, 2020